Kukhona cishe akukho nezinye brand Japanese, okwakuyoholela banegunya efanayo njengoba automaker ngobukhulu Toyota Motors. Yini eyabangela uthando nokuzinikela abalandeli sha, manje sizobe ukuthola ku ngesibonelo Corolla kufinyeleleke futhi ajwayelekile. Yohlobo lweToyota Corolla, ukudalulwa kwalo okungahle uzobona ngezansi, wadayiswa emlandweni walo izikhathi ezingaphezu kwezigidi ezingu-25, okuyinto okufezwayo Herculean.
Classic emithathu ivolumu ngalé nge olinganise letifanele, 100 phesenti brand yingxenye yokuqwashisa kanye nokuqoqa Ubukhulu ukwanele ukunyakaza ukhululekile kwabayisihlanu, kodwa ungagxambukeli ikhuluma ngo Friend nobe emigwacweni yase dolobheni nasemagcekeni ezakhiwo. Ngenxa yokuntuleka imininingwane design elikhanyayo, "Toyota Corolla" ngo-2013 cishe okuhlanganisiwe ne kwepaki landscape ne samabhizinisi. Nokho, eyenza umnikazi yayo umfanekiso ezolile nocabangelayo.
"Phatha iphupho" - ubiza ukuba yakwa Toyota ukukhangisa isiqubulo. Kuzwakala okukhulu. Nokho, naphezu ukukhanya isikhalazo, ukwethula le imodeli njengoba iphupho imoto akulula kangako. Noma kunjalo, iningi abashayeli Corolla siyaqhubeka ukubaqeda imoto-iphupho. Futhi akusiyo kuphela design. Izethameli eziqondiwe salokhu imoto, njengoba umthetho, abantu ngoludala futhi musa ukushintsha brand ozithandayo. Izinzuzo ezinkulu imishini yabo bebe ngokuyinhloko lula nenduduzo. Ukuze siqonde ukuthi la magama asho ku toyotovskoy incazelo, kumelwe uzibuze imibuzo embalwa kwasekuqaleni ukuthi ukhululekile. 2013 Toyota Corolla kunikeza impendulo yakhe. incazelo yakhe wukuthi induduzo - kuba ithuba uphumule beshayela, engesiyo njengoba lula ukufeza njengoba kungase kubonakale efika kuqala. Ingaphakathi Corolla inedizayini bendabuko avulekile. Imoto akuyona into hhayi ecasulayo futhi akusho ukuphazamisa ukuthula.
The ingaphakathi ngeke sijabulise sonke okukhethwa ezintsha-fangled: sezulu cruise control, umshini wokukhulisa trip computer phambi evuthayo futhi izihlalo ezingemuva. Imodeli eziyisisekelo, yebo, anezinye okuqoqiwe inombolo, kodwa konke phezulu isendaweni.
Ukubamba muhle ngokwanele, ukumiswa ukhululekile, futhi sibonga kakhulu kwamandla akukuniki isizathu banethonya njalo zifunana izindlela yokuwuthola maholoholo. Injini cishe inaudible, futhi nokuphathelene toyotovskie kalula kuzo zonke izindikimba ezilawulayo ilungisa kwemizwelo ethulile. Ngokuvamile, i-2013 Toyota Corolla - kungcono ibhizinisi langempela, anti-ukucindezeleka imoto. Ububanzi izinjini eRussia imelelwa ezintathu kuphela likaphethiloli izinjini. Umpofu - injini 1.3-litre ngokukhiphayo 101 amahhashi, futhi uvezwa kuphela isethi isizinda. amabili - injini engu 1.6 litre ngokukhiphayo of 124 amahhashi. Umehluko kuphela phakathi kwawo itholakala ibhokisi ukudluliswa igiya, okuyinto ekhethwe umthengi.
Futhi ekugcineni bonke labo nje ucabanga ukuthenga imoto yalesi brand, ikakhulukazi imodeli ka-Toyota Corolla 2013 ukuncoma elinde kuVelabahlinze umnyaka lo, lapho-ke kuyoba ngokusemthethweni ethulwa isizukulwane esisha imishini, okufanele ethembisa kakhulu. Kodwa lesi yisinqumo sakho kuphela. Phela, ngisho nangemva umbukiso imoto kuzodingeka silinde omunye unyaka. Sekukonke, yohlobo lweToyota Corolla, ukubuyekezwa wabanikazi okuyizinto ngokuvamile omuhle, efana abashayeli isizukulwane sanamuhla. Nokho, khetha kuphela. Inhlanhla bonke abathanda imoto!
"Peugeot 206": izici lobuchwepheshe omunye izimoto ukhululekile kakhulu French